नरसिंह जयन्तीका दिन व्रत बस्दा हुन्छन् सबै मनोकामना पुरा ! – Complete Nepali News Portal
ScotNepal May 2, 2020
नरसिंह जयन्तीका दिन व्रत बस्दा हुन्छन् सबै मनोकामना पुरा ! वैशाख शुक्ल चतुर्दशीलाई नृसिंह जयन्ती भनिन्छ । नृसिंहपुराणको वचन छ– वैशाखशुक्ल पक्षको चतुर्दशीका दिन प्रदोषकालमा नृसिंह अवतारका रूपमा अवतरण भएको हो । जसले प्रतिवर्ष नृसिंहजयन्तीमा मेरो आराधना गर्दछ त्यसमाथि म प्रसन्न हुन्छु ।
नृसिंहजयन्तीका दिन स्वाती नक्षत्र, शनिबार, सिद्धियोग, वणिज करणको योग अत्यन्त दुर्लभ मानिएको छ । नृसिंहजयन्तीको उपेक्षा गर्ने व्यक्ति सूर्य चन्द्र रहेसम्म नरकमा बास हुन्छ ।
पुरा जानकारी भिडियोबाट लिनुहोस्